PDF na Okwu Ihe Ntụgharị, n'efu maka obere oge | Esi m mac
PDF ka Okwu Ntụgharị, free maka a obere oge
Anyị na-aga n'ihu na-ekwu maka ngwa dị maka nbudata n'efu. Oge a anyị na-ekwu maka ịba uru nke ọtụtụ mmadụ nwere ike ịbụ ụdị nzọpụta, ọkachasị ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị yana faịlụ na PDF. PDF ka Okwu Ntụgharị-enye anyị ohere iji tọghata faịlụ na Doc na RTF format ka PDF, idebe imewe, Akara ókwú, ihe oyiyi agbakwunyere, eserese ... nke faịlụ mbụ na PDF. Na mgbakwunye, site na mmelite kachasị ọhụrụ, njirimara njirimara agwa (OCR) anyị nwere ike ịhụ etu nkenke nkenke ntụgharị ahụ sirilawanyewanye mma, na-enye nsonaazụ ndị dịka faịlụ mbụ ahụ.
PDF To Okwu Ihe Ntụgharị nwere a mgbe price nke 14,99 euro, ma a obere oge anyị nwere ike ibudata ya kpamkpam n'efu. PDF Iji Okwu na-enye anyị ohere idezi nsonaazụ enwetara site na ntụgharị iji gbanwee ederede, onyonyo, eserese ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla anyị chọrọ ịme. Otu n'ime njirimara nke kacha baa uru nye anyị bụ ohere nke ịme usoro a na oke, ka anyị wee tinye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlị ka e wee gbanwee ha na akpaghị aka na akwụkwọ Okwu, na-enweghị ịga otu otu.
Ọrụ nke ngwa ahụ dị mfe, ebe ọ bụ na naanị ụzọ atọ anyị nwere ike ịmalite ịtụgharị akwụkwọ. Anyị kwesịrị imeghe ngwa, dọrọ akwụkwọ ka ị gbanwee ma họrọ usoro mmepụta akwụkwọ. N'ikpeazụ, anyị pịa bọtịnụ PDF iji malite usoro ntughari. Ntughari, dabere na nha, emeela ngwa ngwa, yabụ ọrụ ahụ agaghị ewe anyị ogologo oge, ọbụlagodi na enwere ọtụtụ faịlụ anyị ga-ahazi ọnụ.
PDF ka Okwu Ntụgharị, emelitere ikpeazụ na 29-12-2016, dị na mbipute 3.3.13 ma chọọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 500 MB na draịvụ ike anyị. Ọ dakọtara na OS X 10.7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị ma chọọ nhazi 64-bit.
PDF ka Okwu Ihe Ntụgharị-na OCR19,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » PDF ka Okwu Ntụgharị, free maka a obere oge
Storres Jayr kwuru dijo
Daalụ nke ukwuu, zọpụta m 328 pesos
Zaghachi Storres Jayr
Zaghachi Wilson Vega
Sergio Raul Potones Mendez dijo
Daalụ otu nde na-atụ uche m
Zaghachi Sergio Raul Pontones Mendez
Ndewo, unu niile! Ọ bụrụ na mgbe m gara na njikọ ọnụahịa na-egosi na AppStore, ọ bụ n'ihi na nkwalite adịghịzi adị, ziri ezi? I meela nke ukwuu maka nsogbu ahụ na ịgwa anyị maka ezigbo ụlọ ọrụ ndị a!
Google Chrome bidoro inye nkwado maka Touch Bar
Chọpụta pikselụ nwụrụ anwụ na Nyochaa Nyocha, n'efu maka obere oge